Isu tiri bhurogu yakatsaurirwa kune zvinyorwa zvinyorwa uye nhau dzekunyora. Isu tinoda kuongorora vanyori vekare uye kubvunzurudza vanyori vakasarudzika senge Dolores Round o Marwan zvakare kugadzirisa vanyori vatsva.
Isu tine vanopfuura mazana mana mazana mana ezviuru zvevateveri veTwitter paaccount yedu @A_literature Kubva kupi
Tinoda kufamba kuburikidza nezviitiko zvakasiyana. Kubva 2015 tanga tichienda pakati pevamwe kune vane mbiri Planet Mubairo uye isu tichakuudza nezvazvo rarama uye kutanga ruoko.
Iyo edhisheni timu yeActualidad Literatura inoumbwa neboka re nyanzvi mune zvinyorwa, vanyori nevanyori vakapihwa mubairo wakasiyana. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chechikwata, unogona titumire iyi fomu kuti uve mupepeti.
Kubva kuManchega mazambiringa makumi manomwe, ndakabuda semuverengi, munyori uye mutambi wefirimu. Ipapo ndakatanga kudzidza chirungu philology, kudzidzisa uye kududzira mutauro weSaxon zvishoma. Ini ndakazopedzisira ndadzidziswa sepereta uye dhizaini kuverenga kuverenga kune vaparidzi, vanyori vega, uye nyanzvi dzekutaurirana. Ini ndinobata mawebhusaiti maviri: MDCA - CORRECCIONES (https://mdcacorrecciones.jimdofree.com/) uye MDCA - DZIDZA SHONA NESpanish (https: //mdca-aprende-a-tu-aire-ingles-y-espanol.jimdosite. com /). Ini zvakare ndine webhusaiti yekunyora, MDCA - NOVELAS Y RELATOS https://mdcanovelasyrelatos.jimdofree.com/) uye blog, MDCA - QUÉ HAY DE LO MÍO (https://marioladiazcanoarevalo.blogspot.com.es/), uko Ini ndinonyora nezve zvinyorwa, mumhanzi, nhepfenyuro yeterevhizheni, cinema uye zvetsika nyaya mune zvese. Neruzivo rwekugadzirisa uye dhizaini, ini ndoga-ndakaburitsa zvinyorwa zvishanu: "Marie", nhoroondo trilogy "Mapere nenyeredzi" uye "Muna Kubvumbi".
Bachelor of Dzidzo, taura mutauro uye zvinyorwa, kubva kuUdone (Universidad de Oriente, Nucleo Nueva Esparta, Venezuela). Yunivhesiti purofesa muzvigaro zvezvakaitika, zvinyorwa zveSpanish neLatin America, pamwe nemumhanzi (kuwirirana uye kuridza gitare). Bachelor of Dzidzo, taura mutauro uye zvinyorwa, (Udone). Yunivhesiti purofesa wezvinyorwa, nhoroondo uye mumhanzi. Ini ndinoshanda semunyori, ndakamira kunze munhetembo uye nhoroondo dzemumaguta. Mamwe emabhuku angu ndeaya: "Transeúnte", nyaya; "Mitezo iri pamhenderekedzo", muunganidzwa wenhetembo. Ini zvakare ndinoshanda seyakagadzika yezvakagadzirwa uye zvinyorwa zvinyorwa.
Mupepeti nemunyori kubvira 2007. Mudiwa wemabhuku kubvira 1981. Kubva ndiri mudiki ndave mudyari wemabhuku. Uyo akaita kuti ndivanamate? Nutcracker uye Mambo weMakonzo. Zvino, pamusoro pekuve muverengi, ini ndiri munyori wenyaya dzevana, dzevechidiki, dzerudo, nhoroondo uye eroottinen enganonyorwa. Unogona kunditsvaga saEncarni Arcoya kana Kayla Leiz.
Ana Lena Rivera Munoz
Ndiri Ana Lena Rivera, munyori wenyaya yekufungidzira inoverengera nyeredzi yaGracia San Sebastián. Nyaya yekutanga yaGracia, Lo que Callan los Muertos, akagashira iyo Torrente Ballester Award 2017 uye mubairo wekupedzisira weFernando Lara Award 2017. Ndanga ndichida zvekunyepedzera mhosva kubva paudiki, pandakasiya Mortadelo naFiremón kuPoirot naMiss. Marple, saka mushure memakore akati wandei semaneja mune yakakura nyika dzepasi rose ndakachinja bhizinesi nekuda kwekuda kwangu kukuru: Iyo yekuparwa nhoroondo. Saka akazvarwa Gracia San Sebastián, mutsvagiridzi anotungamira mune yangu yekuyedza inoverengeka nhepfenyuro, uko vanhuwo zvavo, senge mumwe wedu, vanogona kuita matsotsi, kunyange kuuraya kana hupenyu hwavaisa mumamiriro akaoma. Ini ndakazvarwa muAsturias, ndine degree muMutemo uye muBusiness Administration uye Management uye ndakagara muMadrid kubvira mazuva angu ekuyunivhesiti. Nguva nenguva ndinoda kunhuwa gungwa, iro Gungwa reCantabrian, rakasimba, rine simba uye rine njodzi, kunge enganonyorwa dzandinokunyorera.
Kufanana nevazhinji vanopikisa, redhiyo yekutarisa uye neakawanda mafaro, kusanganisira kuverenga. Ini ndinotenda yakanaka yechinyakare asi ini handivhare mukati meiyo bhendi kana chimwe chinhu chitsva mumabhuku chikawira mumaoko angu. Ini ndinotenda zvakare kuve nyore uye nyore kwe 'ebook' asi ini ndiri mumwe weavo vanosarudza kuverenga nekunzwa bepa, sezvaiwanzoitwa.
Munyori wekufamba uye zvinyorwa, anoda mavara ekunze. Semunyori wenhema, ndakaburitsa mibairo-yekuhwina muSpain, Peru neJapan nebhuku rinonzi Cuentos de las Tierras Calidas.
Injiniya uye anoda nyaya. Nzira yangu mumabhuku yakatanga naMariane Curley's "Iyo Denderedzwa reMoto" uye yakasimbiswa naRobin Cook "Toxina." Ndine fungidziro yekufungidzira, angave Mudiki Mudiki kana mukuru. Kune rimwe divi, ini ndinodawo kunakidzwa nhevedzano yakanaka, bhaisikopo kana manga. Chero chipi zvacho chinotakura nyaya nacho chinotambirwa. Ndiri zvakare director webhuku rekunyora kwandinonyora maonero angu pamusoro pemabhuku andakaverenga: http://librosdelcielo.blogspot.com/
Degree muSpanish Philology. Kushushikana nezvekunyora, ini ndakaita iyo Master mune Rondedzero uye Yekunyora Kunyora. Kubva ndiri mudiki kwazvo ndaifarira mabhuku, saka mune ino blog unogona kuwana iwo akanakisa matipi ekuti unganyora sei nhaurwa, kana kunakidzwa nekuongororwa kwakanaka kwemabhuku echinyakare.
Ini ndakazvarwa muBarcelona mumwedzi wekupedzisira wema80. Ndakapedza kudzidza muPedagogy kubva kuUNED, ndichiita dzidzo mararamiro angu ehunyanzvi. Panguva imwecheteyo, ndinozvitora senge "amateur" wenhoroondo, anoshushikana nekudzidza zvekare uye kunyanya nezvehondo dzevanhu. Hobby, iyi, iyo ini yandinosanganisa nekuverenga, kuunganidza mabhuku emarudzi ese uye, kazhinji, nemabhuku mune ayo ese mikana yezviitiko. Kana zviri zvemitambo yangu yekuzvivaraidza, ndinofanira kutaura kuti bhuku rangu randinoda ndi "The Godfather" naMario Puzzo, saga yangu yandaifarira ndeyaSantiago Posteguillo yakatsaurirwa kuPunic Wars, munyori wangu mukuru ndiArturo Pérez-Reverte uye wangu mareferenzi mumabhuku ari Don Francisco Gomez de Quevedo.
Ini ndakazvarwa zuva rimwe chete naPrince Henry wekuEngland. Iye muchinda weEngland uye ini ndiri muraibhurari. Ndatenda Karma. (pasina chirevo).